Soosaarayaasha PCB Muhiimka ah | Shiinaha Metal Core PCB Factory & Shirkado
Aluminium PCB loogu talagalay laambadda LED & iftiinka LED
Kani waa 2 lakab alumimum PCB ee warshadaha LED-ka. Mashiinka Aaladda Daabacan ee Birta ah (MCPCB), ama PCB-da kuleylka leh, waa nooc PCB ah oo leh wax bir ah oo saldhig u ah qaybta kuleylka kuleylka ee guddiga. Ujeedada udub dhexaadka MCPCB waa in kuleylka laga weeciyo qaybaha muhiimka ah ee guddiga iyo meelaha muhiimka u ah sida taageerada birta ee birta ama xudunta birta ah. Biraha hoose ee MCPCB waxaa loo adeegsadaa bedel ahaan looxyada FR4 ama CEM3.
PCB Birta Muhiimka ah \_ MCPCB Copper core PCB